Na oge post-oria, gbado anya na ihe ohuru nke ihe eji eme ugbo ala.
Auto Parts & Ngwa
Car Mats maka Honda
Car Mats maka Nissan
Car Mats maka Toyota
Car Mats maka Volvo
Car Mats maka Bmw
Car Mats maka Dodge
Car Mats maka Volkswagen
Car Mats maka Chevrolet
Car Mats IHE GMC SIERRA & SKODA
Car Mats IHE BUICK & AUDI
Car Mats maka Hyundai
Car Mats maka Ford
Car Mats maka Mazda
Car Mats maka Jeep
Car Mats maka Subaru
Car Mats IHE Benz & RENAULT
Car Mats maka Tesla
Car ogwe ute
Car Mpụga Ngwa
Ilerlọ na-apụnara mmadụ ihe
TPE Disinfection ute
IHE Tesla Model Y
Maka Chevrolet Silverado Super Ndị ọrụ
Maka Dodge Ram 1500
Maka Toyota Tacoma Super Crew
Maka Ford F150 Super Ndị ọrụ
Maka Toyota 4 Runner
Na oge post-oria, gbado anya na ihe ohuru nke ihe eji eme ugbo ala
Ihe ntiwapụ nke COVID-19 na 2020 mere ka obodo ahụ pịa bọtịnụ nkwụsịtụ. Mgbe ndụ ụlọ ogologo na ọtụtụ akụkọ banyere ịlụ ọgụ na ọrịa ahụ, onye ọ bụla nwere echiche ọhụrụ na nghọta nke ndụ na ndụ. E nwekwara nlebara anya na ahụ ike.
Thegbọ ala ahụ bụ ụlọ nke abụọ nke ndị na-eri ihe, na ahụike nke ihe eji agbatị ụgbọ ala na-ekpebi ndụ ndị mmadụ.
Mgbe ntiwapụ nke COVID-19, ma ọ bụ nsogbu nsogbu isi ụgbọ ala ogologo oge ma ọ bụ nsogbu nhicha ikuku, antibacterial na mgbochi nje aghọwokwa ebe ndị ahịa na-elebara anya. Ndị a ga - abụ ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ "ụgbọ ala ụgbọ ala na-adịghị mma na gburugburu ebe obibi".
Ọ bụ ezie na ọrịa ahụ ebelatala, ọ nwere nnukwu mmetụta na ndụ anyị: n'otu aka, mmata oriri nke ndị ahịa ejiri nwayọ nwayọ. Tupu ọrịa ahụ, onye ọ bụla elebara obere akụkụ anya. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-a onlya ntị na akara "a na-ahụ anya" na imewe. Ndị na-eri ihe na "oge ọrịa" nke ọrịa ahụ metụtara ọrịa ahụ amalitela inwe ihe dị elu maka "ihe ndị a na-adịghị ahụ anya" dịka nchekwa na mma. N’aka nke ọzọ, echiche gbasara ịgagharị njem siri ike gbanyere mkpọrọgwụ n’obi ndị mmadụ. Na mgbakwunye na iwepu ihe nkpuchi, ịkwọ ụgbọ ala nkeonwe abụrụla njem njem ahụike maka ọtụtụ mmadụ.
Dabere na nyocha nke Cox Automotive, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nwe ụgbọ ala ga-atụle "ikuku ikuku" nke ụgbọala mgbe ịzụrụ ụgbọ ala n'ọdịnihu. N’iburu n’uche ịrị elu ahịa n’ọdịnihu, anyị achọpụtala na ọtụtụ ndị ahịa na-enwekwu mmasị na ihe mgbochi ụgbọ ala antibacterial. Ojiji nke ihe na-adịghị egbu egbu, nke na-emetọ gburugburu ebe obibi na antibacterial maka ihe mgbochi ụgbọ ala bụ usoro izugbe nke ịhụ na ahụike na nchekwa nke ụgbọ ala na oge post-oria.
Ná mmalite nke ụlọ ọrụ a na-ere ahịa, DEAO kwenyere na nchebe gburugburu ebe obibi bụ ihe dị mkpa dị mkpa iji chọpụta uru nke ihe nkedo ụgbọ ala mgbe ahịa gasịrị. Karịsịa n'oge pụrụ iche nke oge ọrịa, ọ bulie ịchụso akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nchebe gburugburu ebe obibi, ahụike na nchekwa na ọkwa a na-enwetụbeghị ụdị ya.
Na obi gburugburu ebe obibi, anyị na-etinye aka na ahụike nke akwa ụgbọ ala.
Matsgbọ ala ala ụgbọ ala ọdịnala na-eji ihe ndị mejupụtara kemịkal. Ogbo bu ihe eji eme ogwu bu ihe eji eme ya site na TDI benzene, cyanide, ihe ndi ozo na ndi ogwu ndi ozo.
TDI bụ kemịkal na-egbu egbu nke na-adịghị emetụ gburugburu ebe obibi n'oge usoro mmepụta. Na mgbakwunye, ọ na - ewepụta ihe na - egbu egbu ma na - akpasu iwe n'oge eji ya eme ihe, nke na emebi emebi akụkụ iku ume mmadụ yana ihe ọghọm nke kansa. Ọ bụ ngwaahịa amachibidoro n'oge Olympic.
N'iji usoro ebuanu nke ogbo a, nzukọ a siri ike ma ghara ikuku. Ozugbo mmiri batara n’ime ogbe ụgbọ ala nke ogbo, ọ naghị adị mfe nkụ, ọ dịkwa mfe ijide unyi wee ghọọ ebe a na-azụ nje.
Deao TPE ihe eji eme ka ụgbọ ala na-eme ka ebe obibi mara mma na-agbaji site na ihe ọdịnala, Ọ na-anabata ihe nchebe gburugburu ebe obibi ọhụrụ TPE nke ndị nrụpụta ụgbọala na-amata nke ọma, nchekwa na ndị na-adịghị egbu egbu, enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ dị ka formaldehyde na toluene, nwere arụmọrụ siri ike, ma rụọ ọrụ nke ọma na-edozi nsogbu nke mmiri na-enweghị mmiri.
Site n'ụgbụgbọ ala bara uru na akwa ụgbọ ala mara mma na akwa ụgbọ ala siri ike, nke a bụ ihe a na-apụghị izere ezere na mmepe nke mpempe ụkwụ, ọ bụkwa echiche uru dị mkpa anyị na-achụ.
29 Mingde okporo ụzọ, Menghe Town, Changzhou, Jiangsu, China